Jubbaland iyo Puntland oo shaaciyay Guddiyada Maamulka doorashada ee SIEIT – Kalfadhi
Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo xalay soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah ayaa shaaciyay inay soo gudbiyeen Guddiga doorashada ee horay looga sugayay, kaddib markii maamuladda kale ay horay usoo magacaabeen Guddiyada.
“Dowladaha Puntland iyo Jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyey fulinta heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii lagu heshiiyey. Dowladaha Puntland iyo Jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer Puntland iyo Jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha laysku khilaafsan yahay.
Xubnaha Beesha Caalamka oo uu ugu horeeyo Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midowbay James Swan ayaa door muhiim ah ka qaatay sidii Madaxda Wadatashiga Qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen, loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in Dowladaha Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan Guddiyada si ay qayb uga noqoto qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xaliyo dhamaan qodobada lagu muransan yahay”.
Akhriso: War-saxaafadeedka maanta ee Guddiga Hir-gelinta Doorashada Heer Federaal